ကိုပေါရဲ့ ပိတောက်ရိပ်၊ Ko Paw's Padauk-Yeik: Symphony No. 5
စိတ်ချမ်းချမ်းသာသာနဲ့ မိသားစုနဲ့ အတူတကွ သူ့ကို...
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကျန်းမာ ၊ ချမ်းသာ ၊ ဘေးရန် ခတ်သိမ်း ကင်းဝေး ပြီး တိုင်းပြည်ကောင်းကျိုး ဆထက်ထမ်းပိုး ဆောင်ရွက်နိုင်ပါရန် ဆုမွန်ကောင်း တောင်းအပ်ပါတယ် ၊
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နှင့် မိသားစုလည်း အမြန်ဆုံး ပြန်လည် ဆုံတွေ.နိုင်ပါစေ ၊
အမေ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် …
၁၉ရက်၊ ဇွန်လ၊ ၂၀၁၀ခုနှစ်မှာ ကျရောက်သော (၆၅)နှစ်မြောက်မွေးနေ့ မှသည် နှစ်ပေါင်း (၁၂၀)တိုင်အောင် စိတ္တသုခ၊ ကာယသုခနှစ်ဖြာနှင့် ပြီးပြည့်စုံပြီး သာယာအေးချမ်းသော အမိမြန်မာပြည်မှာ သားသမီး၊ မြေးမြစ်များနဲ့ စုစုစည်းစည်း ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့စွာ နေထိုင်နိုင်ပါစေလို့ ဆုမွန်ကောင်းတောင်းပါတယ်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် သက်တော်ရာကျော် ရှည်ပါစေ …
အမေ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကျန်းမာချမ်းသာပြီး အသက်ရာကျော်ရှည် ပြီး အနာမဲ့ပါစေ၊၊ ဘ၀တိုင်းမှာ ချစ်သောမိသားစု နဲ့ မခွဲမခွာ အတူနေရပါစေ၊၊ အမေချစ်သော မြန်မာပြည်ကြီးသည် လည်း အောင်ပွဲအမြန်ရပါစေ၊၊ အမေအကျဉ်းကျခံဘ၀မှ အမြန်လွတ်မြောက်ပါစေ၊၊
အမေ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် သက်တော်ရာကျော်
ရှည်ပါစေကြောင်း၊မိသားစုတွေ အမြန်ဆုံး ဆုံတွေ့ပါစေကြောင်း၊အမေ ကျမ်းမာ၊ချမ်းသာ ပါစေကြောင်း....ဆုမွန်ကောင်းတောင်းလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျား
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် သက်တော် ရာကျော်ရှည်ပါစေ။
It is funny! Nga Paw ,
Is Birth Day so important for u all?
I really respect Daw Aung Sun Su Kyi, but not for her personal affairs.
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ရဲ့ မြန်မာနိုင်ငံ ရှိ ပြည်သူများအတွက် အနစ်နာခံမှု ၊ တိုင်းပြည် အကျိုးသယ်ပိုးမှု ဂုဏ်သတင်း မွှေးရနံ. များဟာ မြန်မာနိုင်ငံ နှင့် ဒီကမ္ဘာကြီး သာမက Universe သို.တိုင် အစဉ်ထာဝရ ပျံ. နှံ.လျက်ရှိနေမှာပါ ၊